1:03 pm, सोमबार, जेठ ३१, २०७८
काठमाडाैं । भारतमा केही दिनअघि स्कोडा कुशकको औपचारिक उत्पादन सुरु भएको थियो । कम्पनीले भारतमा उत्पादन गरेको मिड साइज एसयूभी नेपालमा पनि आधिकारीक विक्रेता एमएडब्लु स्कोडाले आउँदो साउनमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइसकेको छ ।
फक्सवागन गु्रुपको इन्डिया २.० नीतिअन्तर्गत उत्पादन गरिएको कुशकबाट कम्पनीले निकै अपेक्षा गरेको जनाएको छ । उत्पादनको पहिलो वर्ष भारतमा ३० हजार युनिट विक्री लक्ष्य लिएको स्कोडा कुशकले नेपालमा कस्तो बजार पाउने छ त्यो भने हेर्न केही समय अझै कुर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तोमा नयाँ कुशकलाई सेग्मेन्टको बलियो दावेदार बनाउने ७ सवल पक्षलाई हामीले यहाँ केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
१. युरोपेली ब्रान्ड
कुशक स्कोडाको इन्डिया २.० प्रोजेक्ट अन्तर्गत निर्माण गरिएको पहिलो युरोपेली एसयूभी हो । यो भारतमा निर्माण गरिएको भए पनि यसको बिल्ड क्वालिटी, पर्फमेन्स, ड्राइभिङ प्लेजर, स्टाइल र सुरक्षा युरोपेली मापदण्डकै छ । युरोपेली कारहरु गुणस्तर, अत्याधुनिक प्रविधि, ट्रेन्डसेटिङ मार्केटिङ र डिजाइनका लागि संसारमै चर्चित रहेका छन् ।
२. एक्सटेरियर स्टाइल
कुशकको मस्कुलर लुकले यसको रोड प्रेजेन्सलाई बेजोड देखाउने छ । यसको एक्सटेरियर रोबस्ट र प्रिमियम छ जुन स्कोडा क्यारोक र स्कोडा कोडियाकबाट प्रभावित छ । यसको क्रिस्टलाइन डिजाइन ल्यांग्वेज दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको भिजन आईएन कन्सेप्टसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ ।
यसमा एल आकारको डीआरएलसहितको शार्प हेडल्याम्प राखिएको छ । त्यसैगरी, पछाडिको भागमा इन्डिकेटरसहितको एलइडी टेल ल्याम्प छ । साथै, स्पष्ट रुपमा देखिने स्कोडाको लोगो राखिएको छ । कुशक एक्टिभ, एम्बिसन र स्टाइल गरी तीन भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ ।
३. प्रिमियम इन्टेरियर
स्कोडाका अन्य मोडेलझैं कुशकमा पनि क्वालिटी इन्टेरियर रहेको छ । यसमा स्कोडा सपुर्बमा जस्तै टु-स्कोप स्टेरिङ ह्विल रहेको छ । यसले स्टेरिङलाई प्रिमियम बनाएको छ । कुशकको टप स्पेक भेरियन्टको स्टेरिङ ह्विल, गियर नब र सिटमा लेदर अपहोल्स्ट्री रहेको छ ।
ड्यासको बीचमा १० इन्चको फ्रि-स्ट्यान्डिङ टचस्क्रिन छ, त्यसको तल एसी भेन्ट र एसी कन्ट्रोल राखिएको छ । एसीलाई टच प्यानलबाट समेत कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । साथै यसको ह्विलबेस २,६५१ मिलिमिटर छ ।
४. अवार्ड-विनिङ टीएसआई इन्जिन
कुशकको हुडमा टीएसआई इन्जिन प्रयोग गरिएको छ यो इन्जिनले लगातार ८ वर्ष ‘इन्टरनेशनल इन्जिन अफ द इयर अवार्ड’ हासिल गरेको थियो । कुशकमा प्रयोग भएको इन्जिनले ११५ पीएस पावर र १७५ एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ । यसमा ६ स्पीड म्यानुअल र अटोमेटिक गियरबक्स रहेको छ ।
५. बेस्ट इन क्लास फिचर
सामान्यतया स्कोडा बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फिचर र ड्राइभिङ प्लेजरका लागि लोकप्रिय छ । कुशकमा भने योभन्दा पनि बढी हुनेछ । यसमा १० इन्चको इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम हुनेछ जसले एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो दुवैलाई सपोर्ट गर्छ । नयाँ कुशकमा मिररलिंक, भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिट, रियर एसी भेन्ट, आकर्षक ड्राइभर इन्फोर्मेसन कन्सोल, क्रुज कन्ट्रोल, रेन सेन्सर, एम्बायन्ट लाइटिङ, वुफरसहितको ६ स्पीकर, २ स्पोक स्टेरिङ ह्विल, अटो डिमिङ आईआरभीएम, स्टेरिङ-माउन्टेड कन्ट्रोल, वायरलेस चार्जर जस्ता फिचर छन् । साथै यसमा सनरुफ, किलेस इन्ट्री, स्टार्ट एन्ड एक्जिट सिस्टम पनि रहनेछ ।
६. सुरक्षाका फिचर
कुशकमा ६ वटा एयरब्याग, रियर पार्किङ क्यामेरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सिट माउन्ट, अटो हेलल्याम्प र वाइपर तथा मल्टिकोलिजन ब्रेकिङ सिस्टम जस्ता सुरक्षा फिचर हुनेछन् । स्कोडाले कुशकको सबै भेरियन्टमा इएससीलाई राखेको छ जुन सेग्मेन्टमै पहिलो पटक हो । टायर प्रेसर मनिटरिङ र हिल होल्ड कन्ट्रोल चाहिँ अप्सनल हुनेछ ।
स्कोडा कुशक ९५ प्रतिशत स्थानीयकरण गरी भारतमा निर्माण गरिएको एसयूभी हो, जसले गर्दा यसको मूल्य अपेक्षितभन्दा कम हुनेछ । नेपालमा यसको मूल्य ५० लाखबाट ६५ लाखको बीचमा हुने अनुमान छ । कुशाक क्यान्डी ह्वाइट, ब्रिलियन्ट सिल्भर, कार्बन स्टिल, हनी ओरेन्ज र टोर्नेडो रेड गरी पाँच कलरमा उपलब्ध हुनेछ ।
नेपालमा स्कोडा कुशकको प्रतिस्पर्धा हुन्डाई क्रेटा र किया सेल्टोससँग हुने अनुमान गरिएको छ ।